कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवेदन खुल्यो, कुन पदमा कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवेदन खुल्यो, कुन पदमा कति ?
काठमाडौं, चैत १५ । कर्मचारी सञ्जय कोषले विभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आवेदन खुला गरेको छ ।
कोषको कार्यालय पुल्चोकले वरिष्ठ प्रबन्धकदेखि प्रशासन सहायकसम्मका लागि दरखास्त आवेदन खुलाएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
दरखास्त अनलाइबाट पनि दिन सकिने कोषको कार्यालयले जनाएको छ ।